माछापुच्छ्रे बैंक [आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण] | आर्थिक अभियान
असोज २७, कामाडौं । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १३ दशमलव ३० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ७० प्रतिशत नगद लाभांश गरेर कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले आगामी कात्तिक २६ गते साधारणसभा आयोजना गरेकोे छ । सभा बिहान ११ बजे होटल पोखरा ग्राण्ड पार्दी, कास्कीमा गर्ने जानकारी गराएको हो । सभा कारोना महामारीलाई मध्यनजर गरेर भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने जानकारी गराएको छ ।
साथै, सभाले यस बैंक र अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिन तथा वैदेशिक रणनिती साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएको सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको अधिकृत, जारी तथा चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने सञ्चालकको नियुक्त अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । उक्त साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयरधनीदर्ता पुस्तिका कात्तिक ७ गते बन्द गर्ने जानकारी गराएको छ । यस अधारमा कात्तिक ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा छोटो टुप्पी र लामो पुच्छर भएको कालो शरीरको मैनबत्ति बनेको छ । यस्तो आकृतिले सो दिनमा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको संकेत गर्छ ।
यद्यपि पछिल्लो समयका मैनबत्तिहरुलाई अध्ययन गर्दा आगामी बजार उकालो लाग्ने देखिन्छ । आरएसआई न्यूट्रल जोन ४६ दशमलव ४९ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ४ दशमलव १२ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा नजिकिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्य रेखाभन्दा तल छ ।
सोमवारको शेयरमूल्य रू. ३८६ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिएमा रू. ३७७ मा टेवा पाउने र महँगिएमा रू ३९१ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।